ယ​နေ့ (8-july-2013) ​ရက်​နေ့​မှာ Online ​အ​ခ​မဲ့ ​သင်​တန်း​စ​တင် ​ဖွင့်​လှစ်​လိုက်​ပါ​ပြီ. ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​နေ​ဝန်း​ထင် July 8, 2013 at 3:25 AM
chaungthathar July 8, 2013 at 7:50 AM
​ကို​ညီ​ရေ ​ကျေး​ဇူး​ပါ​ဗျာ ​နေ​တိုင်း​စောင့်​ဒေါင်း​မှာ​ပါ
​တစ်​ခု​တော့ ​တောင်း​ဆို​ပါ​ရ​စေ ​ကျွန်​တော်​က​ချောင်း​သာ​က​ဆို​တော့ ​လိုင်း​မ​ကောင်း​ဘူး​ခင်​ဗျ ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် ​ဖိုင်​ဆိုဒ်​ကို​နည်း​နည်း​လောက်​ချုံ့​ပြီး ​ဒေါင်း​လုဒ်​လင့်​လေး​တွေ​ပါ​ထည့်​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ
​ကို​ညီ ​ချမ်း​မြေ့​သော​ဘ​ဝ​ကို ​ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ပါ​စေ​ဗျာ
gongyi shin July 8, 2013 at 3:59 PM
​ဒီ​နေ့​ပဲ​ကျ​နော် ​စ​တတ်​ပါ​တယ် ​နောက်​နေ့​သင်​ခန်း​စာ​တွေ​ကို​လည်း​စောင့်​မျှော်
​နေ​ပါ့​မယ် ​ကျ​နော်​တစ်​ခု​တော့​တောင်း​ဆို​ချင်​ပါ​တယ် ​သင်​တန်း​ကို​ဖြစ်​နိုင်​ရင်
​တစ်​ဝက်​တစ်​ပျက်​နဲ့​မ​ရပ်​လိုက်​ပါ​နဲ့​ခင်​မျာ ​အ​ကို​သင်​သ​မျှ​ကို ​စိတ်​ပါ​ဝင်​စား​စွာ​နဲ့
​ပုံ​မှန်​တက်​ရောက် ​အား​ပေး​ပါ့​မယ်​လို့​လည်း​က​တိ​ပေး​ပါ​တယ်​ခင်​မျာ ....
kaykay July 8, 2013 at 6:50 PM
nay July 8, 2013 at 6:21 PM
tunlin July 8, 2013 at 8:12 PM
​ကို​ညီ​ရေ ​ကျေး​ဇူး​အ​များ​ကြီး​တင်​ပါ​တယ် ​နေ.​တိုင်း​လဲ​စောင်.​တင်​ပါ.​မယ်.
Htet Naing July 8, 2013 at 9:09 PM
​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ် .. ​အစ်​ကို​ရေ
​ကျ​နော်​တို့​တ​တွေ ​အစ်​ကို့​ဆီ​က​နေ ​ပ​ညာ​တွေ ​သင်​ယူ​ခွင့်​ရ​လို့ ​အ​ရမ်း​ဝမ်း​သာ​ရ​ပါ​တယ်။
​သင်​တန်း​လာ​တက်​ဖို့ ​မ​ဖြစ်​နိုင်​တဲ့​သူ​တွေ​အ​ဖို့ ​အ​ခု​လို ​အွန်​လိုင်း​က​နေ ​သင်​ကြား​ပေး​တဲ့ ​အစ်​ကို့​စေ​တ​နာ​ကို ​လေး​စား​အ​တု​ယူ​မိ​ပါ​တယ်။
​အစ်​ကို့​ဆိုဒ်​လေး​ကို ​ကျ​နော့်​မိတ်​ဆွေ​များ​ကို​လည်း ​လမ်း​ညွှန်​ပြီး ​မိတ်​ဆက်​ပေး​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
​နေ့​တိုင်း​ကျန်း​မာ​ပျော်​ရွှင်​စွာ​နဲ့ ​ဆ​န္ဒ​ရှိ​သ​လောက် ​ခ​ရီး​ပေါက်​ပါ​စေ ... ​လို့ ​ဆု​တောင်း​ပေး​ပါ​တယ် ​အစ်​ကို။
winminnaing July 8, 2013 at 9:43 PM
​သင်​တန်း​ဆို​ရင်​တော ​စိတ်​ဝင်​စား​တယ် ​ဘာ​ဘဲ​သင်​သင် ​တက်​မှာ​ဘဲ ​ဗျ..​ခက်​တာ​က ​ကျ​နော်​သုံး​နေ​တာ ​အ​ခု ​ဖုန်း​ကတ်​ထဲ​မို့​လို ​လှိုင်း​မ​ကောင်း​တာ​တ​ခု​ဘဲ​ရှိ​ပါ​တယ်....​ကျ​နော်​လည်း ​ဒီ​နေ့​က​စ​ပြီး​တော ​နေ့​တိုင်း​တက်​မှာ​ပါ..
​အ​ပေါ်​က ​အ​ကို​ပြော​သ​လို ​တ​ကယ်​စေ​တ​နာ​ရှိ​မယ်​ဆို​ရင်​တော​ဗျ......​သင်​တန်း​ကို ​တ​ဝက်​လောက်​က ​မ​ရပ်​လိုက်​ပါ​နဲ့​လို​တောင်း​ဆို​ရင်.........​ကျ​နော် video ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ကြို​စား​ပြီး​တော ​ဒေါင်း​နေ​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျ..
Nya Moe July 9, 2013 at 12:12 AM
​ကျ​နော်​လည်း ​အ​လုပ်​များ​တဲ့​ကြား​က​နေ ​နေ့​တိုင်း​ဒေါင်း​နေ့​တိုင်း​သင်​ပါ့​မယ်​ဆ​ရာ
​ဆ​ရာ​ပ​ညာ​တွေ​လည်း ​ဆ​ရာ့​လို ​အ​ကျို​ရှိ​အောင်​အ​သူံး​ပြူု​ပါ​မယ်​ဆ​ရာ---
​မင်း​မင်း July 9, 2013 at 9:35 AM
RAIN July 9, 2013 at 2:39 PM
THZ ALOT KO NYI.
RAIN July 9, 2013 at 2:54 PM
THZ KO NYI
Nay Htet July 9, 2013 at 3:00 PM
nyi July 9, 2013 at 3:50 PM
gongyi shin July 9, 2013 at 5:26 PM
​ကို​ညီ​ရေ ​ဒီ​နေ့​စောင့်​ကြည့်​နေ​တာ ​နောက်​ထပ်​သင်​ခန်း​စာ​တတ်​မ​လာ​ဆို​ပီး ​ခ​ဏ​ခ​ဏ​ဖွင့်​ကြည့်​နေ​တာ​ပါ
​ဒီ​နေ့​တော့ ​အ​ရင်​နေ့​က​ဟာ​လေး​နဲ့​ပဲ ​ကျေ​နပ်​ရ​တော့​မှာ​ပါ .............
​သင်​ခန်း​စာ​အ​သစ်​ကို ​စောင့်​မျှော်​အား​ပေး​နေ​မယ်​နော် ..............​လေး​စား​လျှက် ...
nainglin July 9, 2013 at 11:15 PM
​ကျေး​ဇူး​အ​များ​ကြီး ​တင်​ပါ​တယ်....​အ​ကို​ရေ.....​အဲ​ဒီ​လို ​သင်​ပေး​မယ့်​လူ....​ရှာ​နေ​တာ ​ကြာ​ပါ​ပြီ..
​အ​ကို့ ​ကို ​ဆ​ရာ ​တစ်​ယောက်​အ​ဖြစ် ​အ​မြဲ ​သတ်​မှတ်​ထား​တာ​ပါ....
​တ​ပည့် ​ခံ​ယူ​ခွင့် ​ပြု​ပါ​နော်.....
myomyint July 10, 2013 at 3:42 PM
MNBC July 10, 2013 at 7:06 PM
lwin kyaw July 11, 2013 at 12:48 AM
lwin kyaw July 11, 2013 at 12:56 AM
Thura thura soe July 13, 2013 at 7:14 PM
Hnin Hnin Khine August 30, 2013 at 11:15 AM